DAAWO-Magaalada Garowe oo looga dhawaaqay Xisbi Siyaasadeed & Madaxdooda oo wacad ku maray – Shabakadda Puntland FM
You are here: Home WARARKA MAANTA DAAWO-Magaalada Garowe oo looga dhawaaqay Xisbi Siyaasadeed & Madaxdooda oo wacad ku maray
DAAWO-Magaalada Garowe oo looga dhawaaqay Xisbi Siyaasadeed & Madaxdooda oo wacad ku maray
Posted on February 4, 2018 by admin | 0 Comments
Xaflad lagu qabtay magaalada Garowe ayaa lagu shaaciyay Urur siyaasadeed cusub oo loogu wangalay Bulsho Political Party, waxaana ka qeyb galay munaasabada lagu furayay masuuliyiin ka tirsan Puntland, siyaasiyiin, Aqoonyahano, odayaal, Dhalinyaro iyo Marti sharaf kale.
Xildhibaan Maxamed Axmed Jaceel oo ah guddoomiyaha KMG ah ee urur siyaasadeedka Bulsho, ayaa sheegay ururkaan inuu yahay urur siyaasadeed heer federal ah Soomaaliya iyo heer Puntland, isagoo tilmaamay in ay furteen aqoonyahano iyo siyaasiyiin doonaya inay ka qeyb qaataan sidii uu dalku uga gudbi lahaa nidaamka qabaliga.
Xildhibaan Jaceel wuxuu sheegay dhawaan inay qabandoonaan shirweyne lagu meelmarindoona xeerka hoosaadka ururkaan ayna sidoo kale xafiis labaad ka furandoonaan magaalada Muqdisho, sidoo kale wuxuu sheegay urur siyaasadeedkaan inay xubin ka ahaaan karaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan.
Siyaasi Cabdi Waran jaan oo kamid ah siyaasiyiintii kasoo qeyb galay furitaanka ururkaan, ayaa soo dhoweeyay ururkaan bulsho, wuxuuna sheegay in loo baahan yahay in waddanku yeesho xisbiyo siyaasadeed, si codka shacabku awood u yeesho loogana gudbo nidaamka qabiilka ee hadda lagu dhaqmo.
Siyaasi Kheyre oo ka socday urur siyaasadeedka Garsoor, ayaa isagana soo dhoweeyay ururkaan, isagoo sheegay in loo baahan yahay in ururadu soo bataan, si taageero loogu muujiyay nidaamka xisbiyada badan islamarkaana dadka aqoonta leh ay helaan fursad ay waddankaan ku hogaamin karaan, iyagoo u maraya nidaamka dimuqraadiyada iyo codka xorta ah ee shacabka.
Xildhibaan Ayaanle Yuusuf Ismaaciil oo ka socday guddiga sharuucda ee barlamaanka Puntlad, ayaa sheegay inay soo dhoweeynayay ururkaan, isagoo shacabka ugu baaqay inay taageeraan oo ay ka qeyb galaan ururka Bulsho, si looga baxo dhibaatada haatan lagu jiro ee uu qabiilku ugu weyn yahay, kaasoo dhalinyarada iyo dadka hamiga kaleh waddankaan u diiday inay helaan fursad ay wax ku hogaamiyaan.
Dadkii kale ee ka hadlay xafladdaan oo isugu jiray dhalinyaro iyo odayaal ayaa soo dhoweeyay ururkaan, waxayna ballanqaadeen inay la shaqeyndoonaan ururkaan cusub ee Bulsho, waxayna madaxda ururkaan ugu baaqeen inay inuu ururku noqdo mid ku shaqeeya rabitaanka shacabka.